Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si MP4 si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si MP4
WLMP waa gaaban Windows Live Movie Project. Faylal ay la kordhin file .wlmp waa files mashruuca in lagu abuuray by codsiga software Microsoft ee - Windows Live Movie abuuray. Laakiin caynkan ah files aan lagu ciyaari karo qaar ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta si joogto ah sida VLC, QuickTime, iPhone, iPad, ama PSP. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si loogu badalo files WLMP in files MP4 for isticmaalka ballaaran.
Taasi waa mawduuca of this article, oo muujinaysa sida ay u badalaan WLMP in MP4 si fudud oo dhaqso. Waayo, kanu, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxaa halkan soo bandhigay. Waxa uu awood u leeyahay in la beddelo ama dhowr files WLMP in files MP4 in daqiiqo, oo weli sii video tayada asalka ah. Geedi socodka oo dhan waa kaliya afar tallaabo oo fudud. Ka dib markii diinta, waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah inaad ku raaxaysatid files WLMP ciyaartoy MP4.
Marka hore, waxaad leedahay si uu u badbaadiyo files mashruuca WLMP sida video files, si aad u isticmaali kartaa this video Converter weyn si loogu badalo faylasha video in qaab kale oo aad rabto. Waxaad shaqadan in Windows Live Movie Kan sameeyey samayn karaa. Just ordi Windows Live Movie Kan sameeyey, in la furo files WLMP aad, ka dibna riix "File Save filimka". Sidaas, waxaad badbaadin kartaa WLMP files si files wmv gooba kala duwan, sida High-qeexidda (720p), Widescreen (480p), ama Standard-qeexidda.
2 Import video files si WLMP si MP4 video Converter
Burcad this video smart Converter. Waxaad geli doonaa ay "badalo" interface. Miyaad aragtaa jiro ah button on dhinaca kore ee bidix ee interface? Hadda, aad u baahan tahay si ay u riix, ka dibna suuqa kala pop-up la keeni doonaa in aad soo dhoofsadaan aad video files ka kombiyuutarka. Ok, kaliya keeno files wmv badbaadiyey in tallaabo 1.
Dhinaca midig ee interface ah, waxaa jira guddi Qaabka Output ah. Waxaad sidoo kale la furo liiska hoos-hoos qaab wax soo saarka ama guji image qaab hoose. Isla markiiba, qaab wax soo saarka daaqadan app ee laga furi doonaa. Just u tag "qaab"> "Video"> "Video MP4".
4 Beddelaan files WLMP in files MP4
In tallaabadii u dambaysay, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhufatey "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa WLMP si MP4 ah video Converter 's interface ugu weyn. Waa intaas. App Tani ku dhameysan doona shaqada inta kale si toos ah.
Dhowr daqiiqo ka dib, diinta video inuu kusoo dhamaan doono. Ka dibna, waxaad ka heli kartaa adiga oo la jecel yahay files qaab MP4 galka wax soo saarka ay. Wadadda file saarka ayaa la dhigayaa hoose ee this interface ugu weyn. Sidoo kale, waxaad si toos ah riixi kartaa fursad u Folder Open ag in la furo folder wax soo saarka. Sidaas, waxaad ka ciyaari kartaa in aad files mashruuca WLMP kasta oo qalab MP4 taageerto ama app.